Qeybta 1:? Waa maxay file M2TS ah
Qeybta 2: Sida loo Play M2TS Faylal ay la VLC Media a Player on Windows?
Qeybta 3: Sida loo Play M2TS Faylal ay la VLC Media a Player on Mac?
Qeybta 4: Maxaad VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah M2TS files?
Qeybta 5: Wondershare Video Converter Ultimate waa ugu fiican VLC Kaaliyaha
Qaybta 1: Waa maxay file M2TS ah?
M2TS files waa kuwa loo isticmaalo Blu-ray cajalid-Video (BDAV). M2TS , oo waxay u taagan tahay MPEG -2 Gaadiidka Stream yihiin kuwa loo adeegsado ujeedada multiplexing of Video kala duwan, Audio iyo sida durdurrada kale. Kuwan waxaa inta badan loo isticmaalo ee video qeexitaanka sare ee Blu Ray iyo Advanced Video sireed High Qeexid.
Kuwani waa kordhin faylka loo adeegsado keydinta files ee-qeexidda sare, iyadoo la isticmaalayo BDAV ah (cajalid Blu-ray Audio / Visual) qaab. Files M2TS taageeraan 720p iyo 1080i qaabab labada files. Magaca iyo qaabka File M2TS noqon kartaa qaab ah "xxxxx.m2ts", halkaas oo "xxxxx" waa lambar 5-god ah, taas oo u dhiganta clip ka hiim. Kordhin file waxaa sameeyay Blu-ray cajalid Association oo waa weel u Audio, video iyo xogta files.
Players VLC ciyaari karo M2TS files labada Mac iyo Windows. VLC Media Player dib ciyaari kara waxa ku qoran H.264 si toos ah iyo video AC3 audio ie M2TS Files aan taageero mid ka mid ah arin kasta oo dibadda ah. Si aad u ciyaaraan files M2TS on Windows, waxaad u baahan tahay oo dhan waa in la furo VLC Player, guji Xulashada Menu ah, tag ikhtiyaarka file furan. Markaasaa waxaa aad looga baahan yahay in Browse button iyo falgali meeshii file M2TS waxaa lagu kaydiyaa your computer. Dooro file ah, taas oo aad rabto inuu u ciyaaro iyo riix OK iyo VLC bilaabi doonaa ciyaaro video M2TS aad dooratay.
Inta badan files ee ku sugan Files M2TS si fudud ayaa ciyaaray karaa iyada oo VLC Media Player on Windows.
Haddii aad socda ee Mac iyo doonayaa inaan ciyaaro aad M2TS Faylal ay madal, ikhtiyaarka waa la heli karaa, iyo doorasho waa isku mid sida in la Windows ah. Waxaad u baahan tahay midig u guji Media, Open File, Meel file .mts ama M2TS File iyo Riix OK yahay inta badan ciyaartoyda VLC Player. Ciyaaro M2TS Files on Windows iyo MAC, waxaa sidoo kale fudud iyo hab cad oo ah Media VLC ka Player dhinaca socda files kuwaas, geeddi-socodka waa wax fudud marka laga reebo xaaladaha qaarkood, halkaas oo qaar ka mid ah M2TS Files aan lagu ciyaari karin sababo la xiriira arrimo gaar ah qaar ka mid ah.
Qeybta 4: Maxaad VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah files M2TS?
Inta badan Files M2TS si fudud lagu ciyaari karo VLC Player, laakiin weli qaar ka mid ah Files M2TS ku jiraan, taas oo VLC ma ciyaari karo. Qaar ka mid ah sababaha qaladaad sida noqon kartaa foomka ah "Baadi Blu-Ray: Tani disc Blu-Ray u baahan maktabad u kelmadaha AACS, iyo habka uu u lahayn", taas oo astaan ​​u yahay in la'aanta ah ee Maktabada AACS kelmadaha muhiim u yahay habka uu u ciyaaro M2TS Files.
Xitaa, xusuusnow in Files M2TS waa files qeexitaanka sare, taas oo u baahan naqshadeynta wanaagsan iyo RAM roon files in la ciyaaray. Sidaas darteed, haddii ay dhacdo, aad dareensan tahay dhib halka socda M2TS Files, hubi on qaabeynta nidaamka kaliya aad, kuwan oo laga yaabaa in sababta kale ee VLC ka Player aan socda qaar ka mid ah M2TC Files. La'aanta codec habboon ee loo baahan yahay inuu u ciyaaro isla files, waxaa laga yaabaa in kaliya ay sababo kale oo VLC ka Player aan socda qaar ka mid ah M2TS Files.
Xaaladdan oo kale, VLC Player ma ciyaari karo qaar ka mid ah M2TS Files, mid app ' Wondershare Video Converter Ultimate ; waxay noqon kartaa mid ah Kaaliyaha VLC ugu wanaagsan ee la mid ah. Wondershare Video Converter Ultimate Waa mid app awood badan oo cajiib ah, kuwaas oo u adeega diinta madal ugu wanaagsan ee cayn kasta oo kordhin video sida. The files kordhin isagoo M2TS si fudud loo rogi karaa iyadoo la isticmaalayo software this ka dibna si fudud loo isticmaali karaa ujeedada u ciyaaro ciyaaryahan la mid ah VLC Player.
Si aad u ciyaaro M2TS files on Mac iyo Windows, taas oo aan la ordaya ee VLC Player, ay si fudud loo rogi karaa iyada oo aan wax dadaal ah la isticmaalayo Wondershare Video Converter Ultimate. Waxaa badasha kala duwan ee file kordhin ka mid qaab kale oo loo isticmaali karaa oo dhan cayn kasta oo ah baahida.
Just raaci Screenshot ee la mid ah oo aad u hesho faylasha aad u sarifay.
Screenshot hoose waxay muujinaysaa habka waa wax fudud oo u baahan dhow wax dadaal ah oo aan lahayn qasabno for hawlaha qaab beddelidda in ay qaataan meesha.
Si loo badalo M2TS Files in qaab kasta oo kale, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay riix qaybta Converter M2TS ee Wondershare oo taga si "Beddelaan" tab.
Markaas guji "Add Files" menu in aad ku darto files aad M2TS deegaanka si ay app this.
Markaas doortaan qaab saxda ah ee wax soo saarka, kuwa aad jeceshihiin, iyo garaacida ah "Beddelaan" joogo button rukun gacanta midigta hoose ee this M2TS Video Converter ee interface, geeddi-socodka qaab beddelidda uu dhameystiray.
Iyadoo hawlaha qaab beddelidda waa iska sahlan, waxaan sidoo kale dareemi karaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka muhiimka ah ee la xiriira arrintan in qalab loogu badalo karaa in AVCHD M2TS files ilo walba oo lagu video in AVI, MKV, wmv, MP4, FLV, 3GP / 3G2, MOV, MTS, iyo VOB iyo qaar badan.
> Resource > VLC > Sida loo Play M2TS Faylal ay la VLC Media Player?